Tenga Reishi Ganoderma Lucidum Mushroom & Cordyceps Militaris Sinensis Extracts Capsules | WoopShop®
Health & Beauty Rudyi
Muenzaniso Nhamba: 60Pcs / Bhodhoro
Anoshamisa Mambo weHerbs!
Kuwanda: 60Pcs / Bhodhoro
Kushandiswa uye Kushandiswa: 2 Capsules nguva imwe neimwe, 2 nguva pazuva mushure mekudya.
Ganoderma lucidum mushonga unoshandiswa pachinyakare mumushonga wechiChinese pakutanga kutonga kweMambo wekutanga weChina, Emperor Qin Shi Huang makore anopfuura zviuru zvishanu apfuura. MuChinese yekare Chinese mishonga yemakwenzi chinyorwa 'Shen Nong's Herbal Classic' inoronga Ganoderma lucidum seHerbic Tonic (Giredhi 5,000) 'Superior Herb' sezvo isina-chepfu uye isiri-chepfu, isina-yakatarwa, inovandudza hutano hwemuviri. Kuenderera mberi kwekudya kunogona kubatsira muviri kuwana hutano hwakakwana.
Cordyceps mushonga wakasarudzika wemusikirwo unowanikwa kuMabvazuva, idzo ngano dzinoti haisi chirimwa kana mhuka, uye icho chakakosha zvakanyanya kupfuura huremu hwacho mugoridhe. Zvinoshamisa kuti, ngano pamusoro peCordyceps haicherechedzi pakuenzanisa nezvazviri.
Mazuva ano, Cordyceps inozivikanwa kuwedzera kusimba, masimba esimba, uye kutsungirira, chave chimwe chevatengesi vepamitambo vanotengesa zvakanyanya pakati pevatambi venyika. Kiriniki, Cordyceps inoshandiswa kuvaka uye kutsigira immune immune mune akasiyana immune maitiro akaomeswa anosanganisira kuneta, gomarara, uye mamiriro ekufema, kunyanya asima.
Anti-tumor: Zvakasimbiswa nemasayendisiti akawanda kuti Antitumor basa reReishi riri kuburikidza nekusimudzira immunologic basa. Iwo anoshanda macomputer muReishi, kunyanya mapolysaccharides uye triterpenes, anogona kuvandudza kudzivirirwa kwemuviri kusingatarisike, uye kuwedzera kudzivirirwa kwemaseru emuviri uye mvura dzemuviri, kuitira kusimudzira kugadzirwa kwemasero edziviriro, obva aburitsa mhedzisiro yekudzivisa mamota.
Kugadzirisa hutachiona: Reishi inogona kuvandudza zvakanyanya macrophage phagocytosis index uye phagocytosis muzana, uye yakasimba basa rema macrophages, inowedzera hutachiona hwemuviri.
Kuvandudza chirwere chemoyo: Reishi inobvisa ine pachena cardiotonic effect. Inogona kusimbisa myocardial contraction simba, kuwedzera myocardial contraction amplitude uye kubuda, uye kuvandudza myocardial cell hypoxia kugona. Reishi inogona zvakare kuvandudza kutenderera kweropa mucoronary artery, uye kuwedzera coronary artery kuyerera.
Kuvandudza metabolism: Reishi ane kugona kusimudzira pancreas kubudisa insulin, kukurumidza kweropa microcirculation yeganda repancreas, uye kugadzirisa pancreas 'basa.
Kuchengetedza chiropa: Kazhinji hepatitis inoreva kukuvara kwechiropa kwakakonzerwa nekutyora kwakanyanya kana hutachiona hweHepatitis b. Hazvina mhosva kumberi kana mushure mekukuvara kwechiropa kwakaitika, kutora Reishi kunogona kuchengetedza chiropa uye kudzikisa kukanganisa kwechiropa.
Anti-kuchembera: Kuumbwa kweMahara Radicals, kuchawedzera kuchembera kwemuviri wemunhu. Reishi inobvisa ine yakajeka antioxidant simba, uye inogona pachena kuvharidzira mwoyo uye chiropa lipid peroxidation effect, kuderedza kukuvara kwetishu.
Kuvandudza Neurological Symptom: Reishi ane mhedzisiro yakanaka kwazvo yekuvandudza tsinga basa, kurapa neurasthenia uye imwe neurosis.
Reishi ine marudzi anopfuura gumi nemanomwe emaamino acids, akasiyana siyana ekutsvaga zvinhu, mavhitaminzi, uye zvimwe zvinovaka muviri zvinodiwa kuhutano hwemuviri wemunhu.
Kugadzira bvudzi: Reishi rudzi rwekunaka kusingawanzo mukati memuviri, sekare muMing dzinza, Li Shenzhen, mumwe wemasayendisiti ane mukurumbira muChina yekare, akataura mune yake yakakurumbira pharmacopeia kuti Reishi ane basa rerunako.
Kubva paongororo dze 31
Zvakauya sezviri murondedzero, ndichaedza kuona kuti zvinofamba sei.
Ndakaiwana, ndinoitora kechipiri, mushure mebhodhoro rekutanga, ndinofunga ndakanzwa kufara! Ndatenda.
Handisati ndazviedza, ndinovimba zvinhu zvose zvichafamba zvakanaka
Yakauya mumavhiki matatu. Mirayiridzo yeRussia Nha. Kunyange zvazvo chigadzirwa ichi chisina kushandiswa, asi chakatora pano kubva kune mumwe mugadziri uye mhedzisiro yacho yakanakisa, kazhinji pakupera kwezuva yakadonha kubva kuneta, uye zvino ndinouya uye ndichaita bhizinesi.